World ntu Association
Rem nwere ike chọta ihe ọ bụla iji nwee ike ịkọwapụta ya. Sea solet patrioque na, quas meliore ocurreret eam on.
Ọrụ 1Ọrụ 2Ọrụ 3Ọrụ 4
Chọpụta uru nke mkpakọrịta ọrụ anyị!
Banyere World ntu Association
Soro n’ògbakọ buru ibu site ntu na aka mara mma.
Nabata na World ntu ntu, ndị otu ọkachamara maka ndị na-ese ntu.
Natù Ntu ,wa, nke e hibere na 2005, ji nnukwu ọrịị merie ahịa ahụ.
WNA bu otu ndi nwere mmasi na aka na ntu.
Natù Ntu iswa bụ associationTỌ nwere mmasị maka ndị na-ese ntu, nke a na-agba mbọ ichebe, ịkwalite na ịghọta njirimara ọkachamara.
Na mmekorita ya na European Nail Academy, ndị na-ese ntu a kwadebere n'ụzọ maka uru ọhụụ ha na ọdịnihu ga-eweta dị ka akụkụ nke ọzụzụ ọzụzụ tozuru oke ma sie ezigbo ike site na ndị na - enye ọzụzụ ọzụzụ. Ezubere ọzụzụ ndị ọzọ na ịkwalite profaịlụ ọrụ niile na-ahụ maka njiri dị elu maka ndị ahịa nke ụlọ ntu.
maka Onye asọmpi
Na imekorita ya na European Nail Association na International Nail Association, World ntu ntu ga-elebara anya na nhazi nke mba na mba, ọkachasị ihe kachasị mkpa na ụlọ ọrụ ntu, World NAIL CHAMPIONSHIP, nke gụnyere ihe ndị ọzọ bụ asọmpi ziri ezi na nke enyi. onye asọmpi na nsọpụrụ maka arụmọrụ nke ntu ntu ọ bụla na-ahụ ya dịka ọrụ.
Nke a gụnyere ọzụzụ na nkwalite ndị juro bụ ndị a zụrụ azụ dabere na nyocha nke mba na ndị na-arụkwa ọrụ maka ọdịmma ndị na-ese ntu, yana mmepe nke ụkpụrụ asọmpi ọkwa dị iche iche iji nwee ike ikpebi ndị mmeri n'ụzọ doro anya.
maka Izi ezi
Nchedo nke ndị nrụpụta ntu si asọmpi na-ezighi ezi, ọzụzụ na-enweghị ọrụ, ụlọ ọrụ ire ure na ngwaahịa na-enweghị ikike bụ mpaghara ọzọ dị oke mkpa.
Ekwesighi imebi nchekwa ụlọ ntu na ndị ahịa ha n'okpuru ọnọdụ ọ bụla, ọkachasị n'oge anyị nke ịba ụba nke ndị na-achọ nchọpụta na ahịa. Mmejuputa iwu nke European Cosmetics Iwu site na imekorita ya na ndi isi nwere ibu odi nkpa.
Ị ga onye otu
Soro na ndị otu zuru ụwa ọnụ nke ndị na-ese ihe ntu!
Mgbe ịmalite azụmahịa,
Azụmaahịa na njikwa.
Belata nnabata maka iche iche
ahuru ahia ahia!
EGO: Nzukọ ọgbakọ na ụlọ ọrụ ọzụzụ dị iche iche.
Akwụkwọ WNA & ihe mmado ụzọ n'efu
maka ụlọ ihe nkiri gị.
Gwọ ndị otu naanị € 9,50 kwa ọnwa!
Mgbe ndebanye aha gara nke ọma Mgbe idebanye aha, anyị ga-ezitere gị data ịnweta na Portal nhazi ọkwa.
Mpempe akwụkwọ ndebanye [German]
Das sind Uru gị
Uru gị dị ka onye otu nke nnukwu mkpakọrịta maka ntu na aka mara mma.
Nkewa nke salons salon
Akwụkwọ nke amamịghe
Nkwadebe maka iru eru
Paspọtụ ntu na Europe
Ememme ngụsị akwụkwọ na-agafe ụwa
Asọmpi Iko ụwa
Ndi otu Nail Association nke World nwere ikike
isonye na World Championship na-enweghị ndebanye akwụ ụgwọ.
A na-azụ ndị juro dị ka ọkwa dị elu, dịka ụkpụrụ mba ụwa si dị na ya na nke ọla edo
Gosiri na ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị a ma ama, omume, ọnyà, wayo na imebi UWG
Nkwupụta mmasị dị elu na bọọdụ ndụmọdụ
Nzukọ ọmụmụ ihe & ihe omumu
Ndụmọdụ gbasara ajụjụ niile dabere na nzukọ ọmụmụ ihe na ihe ọmụmụ dị iche iche
Ndị kọntaktị ruru eru
Ọkachamara na ndị ọrụ ruru eru ga-elekọta gị nchegbu
Nkwadebe maka asọmpi
A zụrụ ndị asọmpi ahụ n'ọkwa dị elu, dịka ụkpụrụ mba ụwa si dị na ya na ọla edo
A na-agwa ndị asọmpi oge niile n'asọmpi mba na ụwa niile
Akwụkwọ ozi oge niile na ozi gbasara aha ogo nke TOP 25 nke ụwa
Nkwado nke ndị asọmpi
A na-akwado ndị ruru eru so na asọmpi iko Nailpro dị ka Sacramento, ISSE Long Beach, IBS Las Vegas na Premiere Orlando.
Ewelite thelọ thelọ oriri na ọoriụ byụ site na ịkọwapụta ma nye onyinye WNA
Aka na mbido
Otu tozuru etozu dikwa n ’aka gi
Ị ga Erfolgreich
Site na WNA dịka nkwado maka onye nrụpụta mbọ ntu.
1. Kọọ akụkọ
Anyị mara maka ya!
Debanye ma jiri uru!
Download ndebanye PDF
Onye isi ala Ina Maria Schmid
Onye isi ala KoR Dipl.-BW Ina Maria Schmid MBA
Ọ dị maka ndụmọdụ onwe gị.
A ga-eji ọ gladụ azịza ajụjụ gị n ’akwụkwọ ozi ma ọ bụ n’ekwe ntị.
WNA - World Nail Association
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu.
Mmekọrịta onye na-enye nduzi na ajụjụ niile.
Ahụmahụ na ike.
Maka na ikwesighi ikwu banyere mmemme, ị ga-ebi ya!
Ọ dị mma ịmara ebe ihe niile gbasara ịga nke ọma gị.
Inwekwu ohere - n’oge adịghị.
Netlọ nchekwa ebe ị na-edebe ụlọ mma.
Ọtụtụ ezigbo ebumnuche maka ịbanye n’otu ENA. Ọ dị mma ịmara ihe ị na-abanye.
ENA - European ntu ntu
Anyị ịkpọtụrụ ekwentị:
Adreesị email anyị:
Ikike niile echekwabara 2021. - Ndi World ntu ntu weputara